South Sudan Oo Lagu Dilay Hawlwadeeno Baadhayay Cudurka Ebola - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
South Sudan Oo Lagu Dilay Hawlwadeeno Baadhayay Cudurka Ebola
Jubba(ANN)-Hay’adda Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM) waxay canbaaraysay falka dilka ah ee lagula kacay saddex ka mid ah shaqaalaheeda gargaarka oo lagu diley horaantii toddobaadkan South Sudan, halkaas oo ay ka wadeen baadhitaanka caafimaad ee cudurka Ebola ee aagga xadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo iyo Uganda.
Saddexda qof ee mutadawiciinta ah, laba nin iyo haweenay ahaa, ayaa la qabtay kadib markii is-rasaasayn iyo isku dhacyo ay ka dhex dhaceen kooxaha hubaysan ee gobolka Central Equatoria. Laba nin oo kale, rasaasta ayaa sababtay laba ka mid ah uu yahay kooxaha rabshadu dhexmartay, kuwaas oo mid uu yahay dhaawac fudud, kuwaas oo IOM, sheegtay in ay rajaynayaan inay ka soo kacaan dhaawacyadooda.
Warbixinta ay soo saartay hay’adda socdaalka aduunka ee IOM ayaa lagu sheegay in haweeney mutadawiciin ah iyo wiil afar sano jir ah oo la shaqeynayay la dilay. “Meesha ay joogaana aan wali la aqoonsan.”
IOM waxay joojisay baadhitaanada Ebola shan meelood oo laga soo galo xadka, waxayna ku sababaysay dagaalka ka socda deegaanka Isebi. iyadoo sheegtay in weli ay sidoo kale ka jiraan deegaamada Bazi, Kirikwa, Lasu iyo Okaba, taas oo noqotay ayay tidhi, “dhacdo caan ku ah carqaladeynta jawaabta Ebola sababta oo ah dagaalada gobolka.”
“Waxaan ka xunnahay anaga iyo shaqaalahayaga South Sudan, qoysaska dhibanayaasha iyo dhammaantayo oo mar kale ku celineynaa in bini-aadamnimada iyo rayidka anay ahayn oo aan waligood loo dulqaadan doonin falalka foosha xun ee rabshadaha wata – ma nihin bartilmaameed, “ayuu yidhi agaasimaha IOM António Vitorino.
Dagaallada ka socda South Sudan, ayaa caan ku ah Koonfurta Suudaan, in kasta oo heshiis nabadeed laga gaadho, laakiin warku wuxuu ku soo beegmayaa , iyadoo Madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar ay muujiyeen war ku saabsan heshiiskii awood qaybsiga ee dowladda oo ay hakiyeen.
Waxa kale oo ay ku soo beegmaysaa iyadoo cudurka Ebola ee ka dillaacay DR Congo uu galay bishii shanaad, iyada oo tirada dhimashada ay hadda tahay 2,182 qof, isla markaana ay sii wadayaan feejignaanta virus-ka ee xuduudaha uga sii gudbaya waddamada dariska ah.